Britain oo qaab la yaableh dhalasho ugala laabanaysa hooyadan umusha ah. - NorSom News
Britain oo qaab la yaableh dhalasho ugala laabanaysa hooyadan umusha ah.
Shamima Begum oo ku biirtay kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka ee Suuriya iyadoo 15 jir ah ayaa hada waayi doonto muwaadinnimadeeda dalka UK.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa sheegtay in ay macquul tahay in dhalashada Britain lagala laabto gabadhan 19 jirka ah, maadaama oo ay dhalasho kale ka heli karto dal kale.
Tasnime Akunjee oo ah qareenka qoyska ayaa sheegay in qoysku “ay aad uga xumaadeen” go’aankaas ayna ka baaraan dagayaan sida ay sharciga u miciin bidi karaan.
Begum oo bariga London ka tagtay 2015 ayaa sheegtay in ay ku laabato Suuriya.
Toddobaadkii hore ayaa la arkay iyada oo ku sugan xero qaxooti oo ku taalla Suuriya ka dib markii la sheegay in ay ka tagtay Baghuz oo ah meesha ugu dambaysa ee ay ku xoogan yihiin kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka, Sabtidii iyo Axaddii midkood ayayna wiil dhashay.
Waraysi ay BBC-du la yeelatay Isniintii, ayay Begum ku sheegtay in aysan marnaba doonanin “in ay astaan u noqoto” kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka, haddana ay doonayso in ay ilmaheeda ku korsato Britain.
Telefishinka ITV ayaa helay waraaq loo diray Begum hooyadeed, taas oo lagu loogu sheegayo in ay gabadheeda ku wargaliso go’aanka laga qaatay.
Xiriirka ay Bangladesh la leedahay
Sharciga muwaadinnimada Britain ee la meel mariyay sannadkii 1981dii wuxuu dhigaa in qof muwaadinnimada laga noqon karo haddii wasaaradda arrimaha guduhu ay ku qanacdo “in sidaas ay dan ugu jirto bulshada” isla markaasna arrintaasi aysan horseedayn in qofkaasi uu noqdo dal la’aan.
Waxaa la rumaysan yahay in faraceedu uu ka soo jeedo Bangladesh, balse markii ay BBC-du waydiisay arrintaas waxay sheegtay in aysan haysan baasaboorka Bangladesh isla markaasna aysan waligeed tagin dalkaas.
Previous articleErna Solberg: Soo galootigu waa inay bartaan luuqada Norwiijiga, si ay u helaan ceyrta
Next articleItromsø: Waxey keensatay shahaadooyin been abuur ah, maxkamad ayaa lasoo taagi doonaa.